Ahoana ny fijerena iPad amin'ny fahitalavitra | iPhone News
Ignatius Room | 17/04/2022 12:00 | iPad, Fampianarana sy torolàlana
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nieritreritra Ahoana ny fijerena ipad amin'ny TV hankafy ny votoatin'ny fitaovanao amin'ny efijery lehibe kokoa. Ny fijerena ny iPad amin'ny fahitalavitra dia mety amin'ny fankafizana ny lalao ankafizinay amin'ny fampiasana a Baiko fanaraha-maso.
Tena ilaina koa izy io amin'ny fijerena ireo sary sy horonan-tsary izay notehirizinay tao amin'ny fitaovanay, fijerena horonan-tsary avy amin'ny YouTube, sehatra horonan-tsarimihetsika mivantana... eny, tsy dia marani-tsaina araka izay irinay ny fahitalavitranay.
Raha hijery ny iPad amin'ny fahitalavitra dia manana safidy roa izahay:
1.1 tselatra mankany amin'ny cable hdmi
1.2 USB-C mankany HDMI tariby
2.2 TV marani-tsaina afaka AirPlay
3 Mandefasa votoaty amin'ny alàlan'ny AirPlay amin'ny fahitalavitra
3.1 Mijere fampiharana iPad amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny AirPlay
3.2 Mijere video iPad amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny AirPlay
Ny fampiasana tariby hijerena ny iPad amin'ny fahitalavitra no fomba mora indrindra ary ankoatra izany, mampihena ny faharetana ho aotra. Raha te hankafy ny lalao ankafizinao amin'ny fahitalavitra ianao nefa tsy misy fiatoana (fahatarana famantarana), ny fampiasana tariby no vahaolana tsara indrindra.
Miankina amin'ny modely iPad, mila a tselatra na USB-C mankany amin'ny tariby HDMI.
tselatra mankany amin'ny cable hdmi
Raha misy fifandraisana tselatra ny fitaovanao, mila tselatra mankany hdmi cable ianao, tariby azontsika vidiana ao amin'ny Apple Store na ao Amazon latsaky ny 20 euro.
Ny olana amin'ny tariby Amazon dia ny mpanamboatra sasany, milaza fa ny tariby dia voamarina avy amin'ny Apple (MFI tombo-kase), na dia tsy marina aza izany.
Raha tsy nohamarinin'ny Apple tamin'ny fomba ofisialy izany (sarotra ny milaza izany), mety hiasa amin'ny voalohany ny adaptatera, saingy rehefa mandeha ny fotoana, mety tsy hiasa intsony.
Alohan'ny hisafidianana tariby iray na iray hafa dia tsara ny mamaky ny hevitry ny mpampiasa. Oh tsara, mandoa mihoatra ny 50 euros fa ny vidin'ny tariby ofisialy ao amin'ny Apple Store.
Raha vantany vao mampifandray ny iPad amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny tselatra amin'ny tariby HDMI, ny sary avy amin'ny iPad dia hanomboka ho azy hiseho eo amin'ny efijery fahitalavitra, tsy mila manao fanitsiana amin'ny iPad izahay.
Miaraka amin'ity tariby ity, fitaratra ipad écran amin'ny tv. Raha vonoinay ny efijery dia hijanona ny fampitana.
USB-C mankany HDMI tariby
Raha misy seranan-tsambo USB-C ny iPad-nao dia mila tariby USB-C ianao. USB-C mankany HDMI. Tsy toy ny tariby tselatra, afaka mampiasa tariby misy ianao, satria fenitra dia tsy mitaky karazana fanamarinana izany.
Mazava ho azy, aza misafidy ny vahaolana mora indrindra raha te hankafy votoaty avy amin'ny iPad amin'ny kalitao tsara indrindra ianao ary izany, rehefa mandeha ny fotoana, ny ampahany USB-C dia tsy simba, satria io no tena hokasihintsika mba hampifandraisana azy amin'ny fitaovantsika.
Raha vantany vao mampifandray ny iPad amin'ny fahitalavitra amin'ny fampiasana tariby USB-C amin'ny HDMI, ny iPad sary dia ho tonga tara amin'ny fahitalavitra tsy mila manao fanitsiana amin'ny iPad izahay.
Toy ny hoe mampiasa tselatra mankany amin'ny tariby HDMI isika, raha tapahanay ny écran dia hijanona ny fampitana, noho izany dia tsy mety amin'ny fihinanana votoaty avy amin'ny sehatra horonan-tsary mivantana.
Ny fomba bebe kokoa mora sy mora ny mijery iPad amin'ny fahitalavitra dia mampiasa ny teknolojia AirPlay an'ny Apple.
Miaraka amin'ny AirPlay, afaka manao kopia ny efijerin'ny fitaovantsika isika (mijanona eo amin'ny efijery) na alefaso amin'ny endrika video ny atiny hilalao ny atiny amin'ny alalan'ny famonoana ny efijerin'ny fitaovantsika.
Na dia teknôlôjia an'ny Apple aza ny AirPlay, tato anatin'ny taona vitsivitsy izay no nanomboka nanome alalana azy mba ahafahan'ny mpanamboatra hafa mampiasa izany amin'ny fahitalavitra marani-tsaina.
Raha te hampiasa AirPlay isika manana safidy 3 izahay:
TV marani-tsaina afaka AirPlay
Ny fitaovana tsara indrindra hankafizana ny fampiasa AirPlay dia Apple TV, ny fitaovana Apple izay miasa toy ny ivon'ny HomeKit ary izany, ankoatra izany, dia mamela antsika hankafy na inona na inona sehatra video streaming
Noho ny fifandraisana tsy misy tariby, hahita fahatarana foana isika raha tiantsika ny handika ny efijery amin'ny fahitalavitra, ka tsy mety ny mankafy lalao izay mety hisy fiantraikany amin'ny lalao na ny traikefan'ny mpampiasa ny karazana fahatarana rehetra.
Ny Apple TV mora indrindra izay atolotry ny Apple amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia ny modely HD Misy vidiny 159 euro ary manana fitahirizana 32 GB.
Raha tianao izany mankafy horonan-tsary 4K amin'ny alàlan'ny streaming tsy maintsy mandoa ny 199 euros izay lafo ny modely mora indrindra, modely izay misy amin'ny dikan-teny misy fitahirizana 32 sy 64 GB ihany koa.
Samsung, LG y Sony atolotra amin'ny modely avo lenta, fanohanana ny AirPlay. Amin'izany fomba izany, dia afaka mampiasa ny tena fiasan'ny Apple TV tsy mividy izany.
Raha mieritreritra ny hanavao ny fahitalavitra taloha ianao ary tianao haharitra taona vitsivitsy izany, dia tokony mifidiana modely izay manome fanohanana an'io teknolojia io.
Ny safidy mora indrindra amin'ireo rehetra asehonay anao amin'ity fizarana ity mba hahafahana mankafy ny AirPlay mijery ny iPad amin'ny fahitalavitra dia ny mividy iray amin'ireo karazana hafa. Modely Amazon Fire TV.
Ary lazaiko mora kokoa, satria ny modely mora indrindra amin'ny fitaovana Fire TV Amazon dia ny Fire TV Stik Lite, izay mitentina 29,99 euros, na dia mety ho hita amin'ny a fihenam-bidy 10 euro amin'ny vidiny mahazatra.
Native, Fire TVs dia tsy mifanaraka amin'ny AirPlay, nefa na izany aza, afaka manampy compatibility isika miaraka amin'ity protocol ity amin'ny fampiasana ny fampiharana écran air, fampiharana azo alaina maimaim-poana ao amin'ny fivarotana fampiharana Amazon Fire TV.
Mandefasa votoaty amin'ny alàlan'ny AirPlay amin'ny fahitalavitra
Tsy mitovy Alefaso ny sary avy amin'ny iPad mankany amin'ny fahitalavitra fa tsy ny fandefasana ny votoatin'ny sehatra horonantsary mivantana mankany amin'ny fahitalavitra.
Rehefa mandefa ny sary avy amin'ny iPad mankany amin'ny TV, mitaratra ny écran izahay, ka raha vonoinay ilay izy dia hijanona ny playback.
fa, raha mandefa ny sary avy amin'ny sehatra lahatsary mivantana na fampiharana iray hitehirizana horonan-tsary, azontsika vonoina ny efijery iPad raha mbola mitohy ny playback.
Mijere fampiharana iPad amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny AirPlay
Manokatra ny application izahay lalao na app izay tiantsika haseho amin'ny fahitalavitra.
Midika ny panel control amin'ny fikosehana avy any ambony havanana amin'ny efijery.
Manaraka, tsindrio ny varavarankely roa mifanipaka.
Farany, mifidy ny anaran'ny fitaovana isika izay tiantsika haseho ny sary.
tsarovy, raha esorinao ny efijery dia hijanona ny fitaratra fitaratra.
Mijere video iPad amin'ny fahitalavitra miaraka amin'ny AirPlay
Sokafy ny mpilalao horonan-tsary na sehatra horonan-tsarimihetsika izay handefasana ny atiny amin'ny alàlan'ny AirPlay.
Manomboka milalao ny votoaty izahay ary tsindrio ny efamira misy telozoro miendrika onja (azo miseho na aiza na aiza eo amin'ny efijery ity kisary ity)
Avy eo a lisitra miaraka amin'ireo fitaovana mifanentana rehetra miaraka amin'ny AirPlay.
Mifidy ny fitaovana izahay izay tiantsika ho hita ny votoatiny.
Rehefa manomboka ny playback, afaka mamono ny efijery amin'ny iPad-nay izahay tsy mitsahatra ny playback video.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hijerena ny iPad amin'ny fahitalavitra
watchOS 9: Inona no heverintsika fa fantatsika momba ny rafitra fandidiana Apple Watch manaraka